China Petg Mirror mveliso kunye nabathengisi | IsiDonghua
HIgh Gilahleko I-PETG Iphepha lesipili, iPETG yePlastikhi Mirror Sheet
Isibuko sePETG Ukushishina lishiti elinamatye aguquguqukayo asetyenziswa kakhulu kubunjineli, kwizithambiso, kwizikhongozeli zokugcina, nangaphezulu njengoko kulula ukusikwa kunye nokusikwa ukwenza iimilo ezimbaxa ezineenkcukacha ezichanekileyo. Isibuko sePETGInika uluhlu olubanzi lwezibonelelo ezivela kukucaca okuphezulu, ukugcinwa kwe-gloss komhlaba, akukho mhlophe yoxinzelelo, kwamkela i-inki kunye nepeyinti, kwaye kuvunyiwe yi-FDA kunxibelelwano lokutya. Iphepha lesipiriti le-PETG linikezela ngezinto ezingafaniyo namandla anempembelelo elungileyo, ubhetyebhetye kuyilo olulungileyo kunye nesantya sombumba. Isibuko sethu se-PETG silungele iithoyi zabantwana, izinto zokuthambisa kunye nezinto zeofisi. Sino-0.25 ~ 1 mm ubukhulu, ubukhulu be-915 * 1830 mm, umbala ocacileyo wesilivere ofumanekayo woku-odola ngokusika kwiinkonzo zesayizi.
Izibonelelo zePETG Mirror
Iphepha lesipiriti le-PETG linikezela ngezinto ezingafaniyo namandla anempembelelo elungileyo, ubhetyebhetye kuyilo olulungileyo kunye nesantya sombumba.
Isipili se-PETG ayisindi kwaye iyatshintsha. Ikwayimpembelelo yokumelana kwaye yomelele kuneglasi yendabuko. Isibuko se-PETG sibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokucaca okuphezulu, ukugcinwa kwe-gloss surface, ukungabikho mhlophe koxinzelelo, ukwamkela i-inki kunye nepeyinti, kwaye i-FDA-yamkelwe kunxibelelwano lokutya. Ngenxa yokomelela kwale sheet ye-acrylic, izibuko ze-PETG zilungile kwizipili zangasese, izibuko zokwenza izinto, kunye nokudlala komntwana.
Igama lemveliso Iglosari ePhakamileyo yePET Mirror Sheet, iPETG Plastic Mirror Sheet
Izinto eziphathekayo Izinto zePolyethylene Terephthalate Glycol
Ubungakanani I-915 * 1830mm, isiko lokusika kubungakanani
Ukutyeba 0.25 - 1.0 mm
Ukufihla Ifilimu ye-PE
Ukusetyenziswa Iimveliso zephepha zeplastiki
Iimbonakalo Impembelelo ukumelana, ubhetyebhetye, Eco-friendly, ekhuselekileyo Child
Ukusetyenziswa Izinto zokudlala zabantwana, izinto zokuthambisa kunye nezinto zeofisi
IINDAWO ZOKUPHILA NEZEKHEMIKHALI
Umbuso ngokwasemzimbeni: Iimakhishithi zesipili eziqinileyo
Indawo yokunyibilika: Ayifumaneki
Indawo yokubilisa: Ayifumaneki
Ubushushu boxinzelelo: 716 ° F (380 ° C) malunga ..
Indawo yeFlash:> 842 ° F (> 450 ° C)
Ubushushu obucothayo ngokuzenzekelayo: 880 ° F (471 ° C)
Imida yokuqhuma: Ayifumaneki
Ireyithi yokuPhuma: ayisebenzi
Uxinzelelo loVapor: Ayisebenzi Vapor
Ukuqina kobudlelwane: 1.27
Amashiti esipili e-PETG alungele ukusetyenziswa ekuyileni izinto zokudlala zabantwana, izinto zeofisi kunye nokusetyenziswa kwezithambiso. Izicelo eziqhelekileyo zibandakanya:
• Ukusetyenziswa kwezithambiso
• Unikezo lwe-ofisi
• Uyilo lwegadi
• Isibuko sokhuselo
• Bonisa iimveliso
Itheyibhile ephezulu yePOP
Iphepha lesipili sephepha lesipilisi
iiglasi zephepha lesipili
Iphepha leplg mirorr
Isibuko seplastiki sePETG